नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ माघ १२ गते १९:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । आयात–निर्यातकर्ता व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संघको गत शुक्रबार सम्पन्न ४०औं साधारणसभाबाट सुनिलकुमार वंशलको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको हो ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार अध्यक्षसहित सबै कार्यसमिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
नयाँ कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्षमा विनोदकुमार सेठिया, द्वितीय उपाध्यक्षमा शिवकुमार अग्रवाल, महासचिवमा मदनलाल मित्तल, प्रथम सचिवमा अनिलकुमार अग्रवाल, द्वितीय सचिवमा खगेन्द्र सिटौला र कोषाध्यक्षमा कुमार कार्की चयन भएका छन् ।
कार्यसमिति सदस्यहरुमा अमित मोर, आकाश गोल्छा, गौरव शारडा, जयन्तकुमार अग्रवाल, दिनेशकुमार चोखानी, पवनकुमार अग्रवाल रहेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदीप राजगाढिया, प्रभातकुमार सर्राफ, विष्णुकुमार जोशी, रतनलाल केडिया, रमेशकुमार थापा, रामचन्द्र खेतान, संजय अग्रवाल र सुशील गुप्ता कार्यसमितिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
कार्यसमितिमा चारजना सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ । निवर्तमान अध्यक्ष कार्यसमितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संघको ४०औं साधारण सभाको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार र अन्तः शुल्कको मुद्दा सम्बोधन हुने भन्दै व्यापारमा विकृत व्यापार नगर्न आग्रह गरे । पाम आयल भारत निकासीमा देखिएको समस्या सुल्झाउन सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको र चाँडै समस्या सुल्झने पनि उनले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले व्यवसायीलाई नडराउन आग्रह गर्दै सरकार निजी क्षेत्रको साथमा रहेको बताए । स्वदेशी गार्मेन्टको निकासी बढाउन अमेरिकाको उच्च तहसम्म पुगेर पहल थालिएको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष हिमबहादुर रावलले मुलुकमा व्यवसायमैत्री वातावरण अझै बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रको उत्साह सेलाउन थालेको बताए ।
साधारण सभा उद्घाटन सत्रलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका सतिषकुमार मोर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरुले पनि अर्थतन्त्रको प्रगतिका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार लगायत व्यवसायका समस्याबारे बोलेका थिए ।
साधारण सभाका अवसरमा संघका सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने जिओ अटोमोबाइल्स प्रालि, निकासीबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोटक्सटस प्रालि र महिला उद्यमी जमिला जोशीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश गुप्तालाई संघ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा उहाँको योगदानको कदर गर्र्दै मरणोपरान्त सम्मान गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको टुंगो नलाग्दा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया रोकियो, दोहोरिएलान् त खतिवडा ?
सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीहरू कुखुराका चल्लाझैं दौडेका छन्: प्रधानमन्त्री